Hawaii nyika yakaipisisa muUS yekugara-kune hushamwari pekugara
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Hawaii nyika yakaipisisa muUS yekugara-kune hushamwari pekugara
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hawaii Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Huwandu hwezvipfuyo-zvine hushamwari zvivakwa zvinogona kusiyanisa zvakanyanya kubva kunzvimbo nenzvimbo, zvichiita kuti dzimwe nzvimbo dzenyika dziwanikwe zvakanyanya kune varidzi vezvipfuwo kupfuura vamwe.
Nhamba yezvivakwa-zvine hushamwari zvivakwa zvinosiyana zvakanyanya kubva kudunhu kuenda kudunhu.
Illinois, Mississippi neNew York ndiyo inonyanya kufarira mhuka.
Hawaii, Alaska neWest Virginia ndivo vashoma vanofarira zvipfuyo US.
67% yedzimba dzeUS (dzakatenderedza 85 mamirioni emhuri) vane chipfuwo, uye dzimba dzemamirioni makumi mashanu dzinogarwa nevanohaya. Saka, ko kana iwe uchida kutamisazve neshamwari yako ine furry?
Tichifunga izvi, nyanzvi dzekufambisa dzaida kutsvaga kuti ndedzipi nyika, mataundi nemaguta ane chikamu chikuru kwazvo chemisha inowanikwa yekurenda iyo inogamuchirawo mhuka dzinovaraidza.
Tichitarisa kumusoro makumi mashanu ane vanhu vazhinji US maguta, nyanzvi dzakanyora huwandu hwezvivakwa zvekubhadhara izvo zvinogamuchirawo zvipfuyo. Pamusoro pezvo, isu tawana huwandu hwezvivakwa munzvimbo dzese dzinogamuchira roja nezvipfuyo, zvichiratidza nzvimbo dzakanakisa munyika kuti varidzi vezvipfuyo vagare.
Illinois ndiyo nyika yakanakisa munyika yevaridzi vezvipfuyo vari kutsvaga kuroja, iine 59.87% yezvivakwa inogamuchira zvipfuyo. Saka kana iwe uri muridzi wechipfuwo uchitsvaga kutamira kuchikamu chitsva chenyika, Illinois inogona kunge iri bheji yakanaka kwauri!
Iyo yechipiri-yakanakisa nyika yekurendesa nezvipfuwo ndeye Mississippi, ine 52.28% yekutendera kuve inowanikwa kune varidzi vezvipfuyo. Izvi zvinoita kuti Mississippi ive yepamusorosoro-inoshamwaridzika kumatunhu ese ekumaodzanyemba, uye nzvimbo yakanaka yevaridzi vezvipfuyo kugara.
New York ndiyo yechitatu nyika yepamusoro munyika yekubhadhara zvipfuyo, iine 47.89% yezvivakwa inobvumidza maroja kuunza zvipfuyo zvavo. Iyi yakakwira muzana inoita kuti New York ive yakanakisa nyika kuEast coast yekugara nezvipfuyo zvako.
Wepamusoro gumi Akanaka Nyika dzePet-Shamwari Dzedzimba
chinzvimbo mamiriro Pet Friendly Anorega Yese Lets % Pet Shamwari